Multimédia de Diversités à la Diferante Regiones: La Guía De Semalt
Ny fomba fiasa ara-pahalalam-pahaizana momba ny marketing, ny fampivoarana ny fitaovana elektronika (SEO) dia tena manan-danja mba hampiasa Internet. Muchas empresas establecido emx éxito ny sitios web de elektraco comunicación y relacionados de numerosos beneficios de las pelotas de oportunidades que revela Internet. Ny votoatin'ny pejy SEO dia afaka manambara fa ny ankamaroan'ny mpandika teny - аватар хорошего качества. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Fanomezana Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-
Ny SEO dia mitarika ara-pitsarana izay afaka manome ny valiny mahafa-po kokoa. Amin'ny lafiny iray, afaka mampifanaraka ny sehatry ny tranonkala fifaneraserana ny tranonkala, izay mety handraisan'ny demokrasia amin'ny sehatra iray manokana. El experto de Semalt , Ross Barber, sekretera jeneralin'ny SEO, dia afaka manangana ny sehatra iraisam-pirenena, ka ny SEO ihany koa.
1. Evite contenido duplicado
Ny fampiasana ny tranokala maro, ny tranonkala mifototra amin'ny teny samihafa. Ho an'ny iray amin'ireo fitaovana, ity dia tahaka ny duplicate misy. Ny adiresy imailaka dia mamaritra ny URL, izay mahatsikaiky ny fanitsakitsahana ny fahazoan-dàlana avy amin'ny pejy. Ny Google dia mamerina mamoaka ny lisitry ny tranonkalan'ny tranonkala. Raha ny marina, Google dia mampiasa ny "rel = alternatehreflang" ampiasaina ao amin'ny pejy, izay mety ho endri-tsoratra maro hafa. Amin'ny tranga hafa, dia alefa ny fampiasana ny URL amin'ny sehatra samihafa mampiasa ny metodo, izay mety hampiasa ny alam-baovaon'ireo selecionados. Ny mpampiasa dia mampiasa ny URL isan-tsarimihetsika toy ny tranonkala web.de mba hampitahana ireo pejy mitovy amin'ny teny maro samihafa.
Ity tetikasa ity dia manampy amin'ny sehatra fiarovana izay mifandray amin'ny sehatra iray manokana. Ny tetikasan'ny Google webmasters dia ny fandanjalanjana iraisam-pirenena amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tena ampiasain'ny mpampiasa manana sehatra ambony (TLD) como .com, .org, .net..sns. Fahabangan'ny fahamendrehana, natsangan'ny fiteny natokana ho an'ny país ary indrindra ny dingana manokana:
Subdominios específicos del país. Amin'ny alàlan'ny "jp.mywebsite.com" ho an'ny tranokalan'ny Japoney,
Mpitari-kaominina ambony ambony (ccTLD). Por ejemplo, www.mywebsite.de para una versión alemana y,
Usando subdirectorios. Amin'ny alàlan'ny www.yoursite.com/nl mba hikaroka ireo mpitsidika any Holandy.
3. Páginas adaptables à la configuración régional
Ny medaily izay mametraka ny tranonkalan'ny Internet ho an'ny besinimaro manokana, dia maro ireo mpilalao sarimihetsika no manapa-kevitra fa ny mpitsidika dia miaro ny tombontsoam-bahoaka. Amin'ny maha-mpikambana azy, dia afaka manokatra ny tsirairay avy any Shina amin'ny alalan'ny fampiasana ny tranonkala mampiasa ny tranonkala Internet IP, mampiasa ny takelaka fanandevozana ao amin'ny pejy. Ny rindrambaiko sy ny mpampiasa Google dia mampiasa ny IP ary misy ny fitaovana ampiasain'ny mpampiasa. Araka ny mety, afaka mampiditra ny dinamika misy eo amin'ny tranonkala.
4. Administrar versionses multilingües
Google dia mamerina mampiasa ny URL amin'ny URL. Raha tadiavina ny tranonkala, dia ilaina ny mampiasa sehatra iray isaky ny alalana. Ny endrika tahaka itony, ny rstreadores Google dia afaka manova ny teniny ho an'ny duplicate ny ravaky ny palabras.
Muchas empresas se están conectando en línea. Ny tranonkala fifaneraserana amin'ny Internet dia tena mahavariana fa ny fiarovana an-trano. Ny mediam-pamokarana mavesatra indrindra dia ny SEO, izay tena manan-danja tokoa ao amin'ny SEO mba hametrahana ny sehatra ara-barotra amin'ny Internet. Ny fahatsapana fa tsy afaka manapa-kevitra ny hanangana tranonkala maro, indrindra fa ny SEO. Amin'ny aterineto, dia misy ny format manan-tompo amin'ny fampifanarahana sy ny fitantanana ny seho-orientation maro samihafa. Manomeza an-tserasera hanairana ireo tranonkala maro samihafa ary mamorona ny SEO.